उत्कृष्ट १० बक्स अफिस कलेक्सन - फर्केर हेर्दा २०१७ - साप्ताहिक
उत्कृष्ट १० बक्स अफिस कलेक्सन
सन् २०१७ जनवरी ६ मा एउटा चलचित्र आयो— अन्डरवल्र्ड ब्लड वार्स । वर्षको पहिलो चलचित्रका रूपमा सार्वजनिक भएको उक्त चलचित्रदेखि अन्तिम शुक्रबार प्रदर्शित चलचित्र फिल्मस्टार डन्ट डाई इन लिभरपुल सम्म आइपुग्दा हलिउडबाट ६ सय ७८ चलचित्र सार्वजनिक भएको पाइन्छ, जसमा सेप्टेम्बर महिनामा मात्र १ सय ३ चलचित्र प्रदर्शन भए ।
तीमध्ये कुनै हप्ता एउटा मात्र चलचित्र रिलिज भए भने कुनै–कुनै हप्ता २५ वटासम्म चलचित्र सार्वजनिक भए । ती सबै चलचित्रमध्ये हलिउड बक्स अफिसमा कमै चलचित्र मात्र सफल भए । यो वर्ष ७ सयको हाराहारीमा चलचित्र प्रदर्शन भए पनि ७० वटा चलचित्र पनि व्यवसायिक रूपमा सफल हुन सकेनन्, तैपनि केही चलचित्रले कीर्तिमान नै राख्ने गरी व्यवसाय गरे ।
उत्कृष्ट १० व्यवसायिक चलचित्र
१. ब्युटी एन्ड द बिस्ट
परी कथामा आधारित चलचित्र ब्युटी एन्ड द बिस्टमा एम्मा वाट्सन र डान स्टेभन्सको जोडीलाई संसारभरका दर्शकले रुचाए । बिल कोन्डनद्वारा निर्देशित यो चलचित्रलाई वाल्ट डिज्ने पिक्चर्सले निर्माण गरेको हो । नेपालमा सुनकेशरी मैयाँको बालकथा निकै पहिलेदेखि प्रचलित छ, चलचित्र ब्युटी एन्ड द बिस्ट त्यस्तै कथामा आधारित छ ।
बक्स अफिस कलेक्सन : १ अर्ब २६ करोड ३५ लाख २१ हजार १ सय २६ डलर
२. द फेट अफ द फ्युरियस
चर्चित एक्सन सिरिज फास्ट एन्ड फ्युरियसको आठौं सिक्वेलका रूपमा प्रदर्शित चलचित्र द फेट अफ द फ्युरियस पनि व्यवसायिक रूपमा सफल चलचित्रमा दरिएको छ । एफ ग्रेग्रेद्वारा निर्देशित चलचित्र द फेट अफ द फ्युरियस सम्भवत: बक्स अफिसमा लगातार सफल हुने दुर्लभ सिक्वेल हो ।
बक्स अफिस कलेक्सन : १ अर्ब २३ करोड ५७ लाख ६१ हजार ४ सय ९८ डलर
३. डिस्पिकेबल मी–३
यो पनि सिक्वेल चलचित्र नै हो । कम्प्युटर एनिमेटेड स–साना मिनियन्सको मुर्खतापूर्ण क्रियाकलापलाई दर्शकहरूले अघिल्ला दुई प्रिक्वेलमा पनि रुचाएका थिए । तेस्रो सिक्वेलमा मिनियन्सलगायत अघिल्ला प्राय: सबै रमाइला क्यारेक्टरले चलचित्र डिस्पिकेबल मी–३ लाई बक्स अफिसमा सफलता दिलाए ।
बक्स अफिस कलेक्सन : १ अर्ब ३ करोड ३५ लाख ८ हजार १ सय ४७ डलर
४. स्पाइडरम्यान : होम कमिङ
मार्बल कमिक्सका चर्चित सुपरहिरोहरूमध्ये धेरैले रुचाएको पात्र स्पाइडरम्यानलाई केन्द्रीय चरित्र बनाएर निर्माण गरिएको फेन्टासी साइन्स फिक्सन चलचित्र स्पाइडरम्यान होम कमिङलाई जोन वाट्सले निर्देशन गरेका हुन् । यसपटक पनि स्पाइडरम्यानले दर्शकहरूको मनमा राम्रै्र जालो बुन्यो ।
बक्स अफिस कलेक्सन : ८ अर्ब ८० करोड १६ लाख ६ हजार ९ सय २४ डलर
५. उल्फ वारियर टु
सन् २०१५ मा प्रखर्शित चिनियाँ एक्सन चलचित्रको सिक्वेल हो— वोल्फ वारियर टु । चिनियाँ निर्देशक वु जिङको निर्देशन तथा मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्रका एक्सन दृश्य निकै रोचक छन् । त्यसैले पनि दर्शकले यो चलचित्र मन पराए ।
बक्स अफिस कलेक्सन : ८ अर्ब ७० करोड ३२ लाख ५ हजार ४ सय ३९ डलर
६. गार्जेन्स अफ ग्यालेक्सी भाग–२
मार्बल कमिक्सले आफ्ना कमिक्सका सुपरहिरोहरूलाई पर्दामा उतार्ने क्रममा तयार पारेको गार्जेन्स अफ ग्यालेक्सीले निकै प्रशंसा र दर्शकको साथ पायो । त्यसैगरी वर्ष २०१७ मा आएको उक्त सिरिजको दोस्रो सिक्वेलले समेत निकै राम्रो सफलता प्राप्त गर्‍यो । यो चलचित्र जेम्स गनद्वारा निर्देशित थियो ।
बक्स अफिस कलेक्सन : ८ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख ५ हजार ५ सय २७ डलर
७. थोर : रगनारोक
मार्बल कमिक्सकै एउटा सुपरहिरो हुन्— थोर अर्थात् देउताका सुपुत्र । उनले अर्का भीमकाय सुपरहिरो हल्कसँग मिलेर आफ्नै शैतान दिदीले कब्जामा लिएको साम्राज्य ध्वस्त पार्छन् । हथौडा बोकेर युद्ध गर्ने योद्धा थोरको युद्ध कला दर्शकहरूले निकै रुचाए ।
बक्स अफिस कलेक्सन : ८ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख १ हजार १ सय ८६ डलर
८. वन्डर वुमेन
सुपर हिरोहरूको बाहुल्यता रहेका बेला डिसी कमिक्सले वन्डर वुमेन नाम गरेकी सुपरहिरोइनलाई पर्दामा उतार्‍यो, जसको सुन्दरता एवं डरलाग्दा एक्सन दृश्यले सबैको मन जित्यो । वन्डर वुमेन बनेकी अभिनेत्री गल ग्याडोटले पनि प्रशस्त चर्चा पाइन् भने निर्माताहरूको थैलीसमेत भरियो ।
बक्स अफिस कलेक्सन : ८ अर्ब २१ करोड ८४ लाख ७ हजार १२ डलर
९. पाइरेट्स अफ द क्यारिवियन : डेड मेन टेल नो टेल्स
हलिउडका अभिनेता जोनी डिपले जड्याहा योद्धा ज्याक स्प्यारोको भूमिकाबाट धेरैको मन जिते । पाइरेट्स अफ द क्यारिबियनका प्रिक्वेलहरूको तुलनामा यो सिक्वेलमा ज्याकलाई किशोर देखाइएको छ । फेन्टासी विधाको यो चलचित्रलाई दुई निर्देशक जोआचिम रोनिङ तथा इस्पेन स्ट्यान्डवर्गले संयुक्त रूपमा निर्देशन गरेका थिए ।
बक्स अफिस कलेक्सन : ७ अर्ब ९४ करोड ८६ लाख १ हजार ९४ डलर
१०. स्टार वार्स द लास्ट जेडी
हलिउडमा स्टारवार्स श्रृंखलाका चलचित्र बारम्बार निर्माण भैरहेका हुन्छन् र दर्शकबाट रुचाइन्छ पनि । सिक्वेलको पनि तेस्रो भागका रूपमा आएको चलचित्र स्टार वार्स द लास्ट जेडीलाई दर्शकले मन पराएपछि यसले राम्रो आम्दानी गऱ्यो ।
बक्स अफिस कलेक्सन : ७ सय ४५ करोड ३८ लाख ८ हजार ५६ डलर